Hadii ay Real Madrid ku guul darreysato El Clasico, La Liga wuu dhamaaday (Warbixin) - Caasimada Online
Home Warar Hadii ay Real Madrid ku guul darreysato El Clasico, La Liga wuu...
Hadii ay Real Madrid ku guul darreysato El Clasico, La Liga wuu dhamaaday (Warbixin)
Real Madrid iyo Barcelona ayaa El Clasico ku kulmaaya caawa, taasoo loom eel dhigay kulanka ugu weyn La Liga, waxaana wax walba u muuqdaan macquul ka dib bil iyo bar ka hor, iyadoo sided dhibcood ay u dhexeyso farqiga dhibcaha labada kooxood.
Hadii ay Barcelona aruursato sedaxda dhibcood ee caawa, Catalans ayaa 11 dhibcood ka sara mari doonta Madrid – taasoo go’aamin karta sida kooxda heysata horyaalka ay u difaacato, waxayna marka laba loo eybiyo oo bar lagu daro ay u muuqataa inay inta badan lumisay Horyaalka.
Jose Mourinho ayaa soo gabagabeeyey mashaqadiisa guul la’aaneed kulankii ay la ciyaareen Deportivo La Coruna isbuucii lasoo dhaafay, waxayna ka caawineysaa inay Madrid hesho guusheedii afaraad ee isku xigta tartamada oo dhan, si kastaba hadii laga badiyo waxay sugi doonaa horyaal taariikhda gala inay ku guuleysataan maadaama 11 dhibcood ay ugu samri doonaa kooxda ay xafiiltamaan.
Sababtoo ah kooxna kuma guuleysan weli La Liga iyadoo kooxda kale ka dambeyso sideed dhibcood, sideed dhibcood, waa wixii ugu weynaa ee kooxna aysan kasoo kabsan, Valencia ayaana sanadii 2003-04 ku guuleysatay Primera Division iyadoo laf ahaanteedu ka dambeysay Madrid, waxaana ay kooxdii Rafael Benitez kasoo kabsadeen dhimasho oo markaasoo loo bixiyey “Galactico” weli ma aysan dhcin koox sidaas sameysay.
Siduu xaalku noqon doonaa hadii ay caawa guuleysato Barcelona
K G B L Dh
Barcelona 7 7 0 0 21
Real Madrid 7 3 1 3 10
Sanadii lasoo dhaafay iyadoo uu Barcelona hugaaminaayey Pep Guardiola 10 dhibcood ayey uga samreen horyaalka, iyadoo kooxda Jose Mourinho ay horyaalka ku hanatay Rikoor ah 100 dhibcood. Ayna mudadaas ku dhaliyeen 121 gool.